Badalona, ​​kubva panguva yakapfuura yeRoma kusvika kune wevashanyi aripo | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | Spain maguta, Chii chekuona
Badalona ine peculiarity yekuve imwe yeaya nzvimbo dzakabatwa nekuwedzera kweguta hombe, mune kwayo kesi Barcelona. Nekudaro, inoramba ichingova yakazvimiririra maseru uye guta rechina rine vanhu vazhinji mune ese Catalonia.
Uye zvakare, kwayakatangira inodzokera kune yakasarudzika yekare, sezvakaratidzwa ne Iberian uye Layetan inosara yakawanikwa munzvimbo yavo. Nekudaro, rakagadzirwa seguta ne vaRoma kutenderedza zana ramakore BC pasi pezita re Baetulo. Muchokwadi, iro guta zvakare rine imwe yeakanyanya kukosha echiLatin-era heritages muSpain. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezveBadalona, ​​tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Chii chekuona muBadalona
1.1 Iyo Pont del Petroli, mucherechedzo weguta
1.3 La Badalona maindasitiri
1.4 Parks, iwo chaiwo mapapu egirini eBalalona
1.6 Nharaunda yeDalt de la Vila
1.7 Iyo Museum yeBadalona
1.8 Imba yeDolphins uye Bindu reQuinto Licinius
Chii chekuona muBadalona
Chaizvoizvo zvisaririra zveRoma ndeimwe yezvakanaka zveguta reCatalan. Uye, padivi pavo, mahombekombe akaisvonaka, mapaki akanaka uye seti yakanaka yezvivakwa. Tiri kuenda kunoshanyira idzi nzvimbo dzese dzekufarira.
Iyo Pont del Petroli, mucherechedzo weguta
Pont del Petroli uye Anís del Mono fekitori
Iri bhiriji retsoka, iro rinoenda 250 metres kupinda mugungwa, parizvino ndiyo imwe ye zviratidzo kubva kuguta reCatalan. Yakavakwa muna 1965 kuti matangi makuru emafuta asiyane nemutoro wavo mumatangi akavakirwa izvi.
Sechido, isu tinokuudza kuti zambuko raizoputswa muna 2001, asi rakachengetedzwa kubva pakuputswa neboka revanhu vanobva kuBadalona vachitungamirwa nemubiki wepastry. Josep Valls. Parizvino, inzvimbo huru yekuti iwe udzidzise scuba diving uye, pamusoro pezvose, kuti iwe ufambe uchifadzwa kuvira kwezuva kunoshamisa.
Uchawana monastery iyi kune rimwe divi renzira huru. Icho chimwe cheiyo zvishongo zvegothic wedunhu reBarcelona. Yayo yekutanga yekuvaka yakatanga kubva muzana ramakore rechiXNUMX, kunyangwe yakazowedzeredzwa nekuwedzera iyo blister, kereke, makicheni uye pasevha. Inotaridzawo a shongwe yekudzivirira iyo yaishandiswa kudzivirira kurwiswa kwepirate kubva kugungwa.
La Badalona maindasitiri
Mukati meiyo Anís del Mono fekitori
Guta reCatalan zvakare rinokupa iwe rakapamhamha maindasitiri nhaka rakagadzirwa parakavandudzika mupfungwa iyi muzana ramakore rechiXNUMX. Pakati pezvivakwa izvi panotaridzika fekitori yekare yeAnís del Mono, iyo nhasi iri miziyamu nezvechinyakare kudzikiswa kwechinwiwa ichi.
Izvo zvakakodzerawo kushanyira iyo fekitori yeAuxiliary Kambani yeCommerce neindasitiri, chivakwa chemazuva ano chakavakwa muna 1899 na Jaime Botey ini Garriga, uyo aivewo meya weguta. Icho chivakwa chaizoitirwa kune iyo comic miziyamu. Nekudaro, chirongwa ichi chakamiswa kwenguva pfupi.
Parks, iwo chaiwo mapapu egirini eBalalona
Unogona Solei ini Ca l'Arnús Park
Imwe yeanokwezva makuru eguta reCatalan inhamba yayo yakawanda yemapaki. Hwerengedzo ye 96 mahekita yeguta inzvimbo dzakasvibira uye mapapu chaiwo kuvagari vayo. Pakati pavo iyo Unogona Solei naCa l'Arnús park. Iri rechokwadi bhodhoro rezvebindu zvakare rine dziva uye diki nhare, shongwe dzakadai seiyo yeiyo Tarisa uye the Mvura uye kunyange grotto.
Pamwe chete neizvi, mamwe mapaki muguta ari iyo yeTuró d'en Caritg, iri pachikomo; iyo yekuMontigalá, akakwana kufamba; iya yaGran Sol, nedzimwe mhando dzeAsia; iyo yeNueva Lloreda, nemidziyo yemitambo, uye iyo ichibva kuCasa Barriga.
Bharca María gungwa
Guta rine makiromita mashanu emahombekombe izvo zvine mamiriro akanakisa kuti iwe unakirwe nekugeza uye nemidziyo yakazara kwazvo kuitira kuti kushanya kwako kwavari kuve kwakanaka. Pakati peizvi, isu tichataura mahombekombe weBarca María, del Cristall, yeVabati veHove, chechiteshi y de la Mora.
Nharaunda yeDalt de la Vila
Ndiro zita rakapihwa guta rekare reBadalona, ​​kwemazana emakore nzvimbo yechokwadi yetsinga yeguta. Sezvaungafungidzira, mairi iwe une mamaki akati wandei erunako rukuru. Pakati pavo, iyo masara eanoman amphitheatre en Carrer de Les Eres.
Asi pamusoro pezvose, zvakakosha chechi yeSanta Maria, ine inoshamisa Renaissance façade uye inoshamisa bhero shongwe. Uye, padyo nayo, iyo Torre Vella, inoshamisa imba yemhando yemuzinda kubva muzana ramakore rechiXNUMX. Iyo Plateresque façade uye yayo Gothic cellar inomira mune izvi.
Chekupedzisira, usasiya chikamu chekare cheguta usati waona dzimba dzaro dzakakwirira muNoucentista uye Modernista maitiro. Semuyenzaniso, Ca l'Amigó, Unogona Clapés and the Dzimba Dzimba.
Iyo Museum yeBadalona
Badalona Museum zvidimbu
Isu takatokuudza iwe nezve huru yekuchera matongo inowanikwa pasi pevhu reguta reCatalan. Chikamu chakanaka chezvisaririra izvi chakafumurwa mumuseum inoshamisira inokuendesa kumigwagwa ye Baetulo muzana ramakore rekutanga BC.
Mimwe yematombo anoratidzwa mune ayo angangoita mazana matatu emazana mazana mana emamirimita matsime anopisa, the decumanus kana main street uye, pamusoro pezvose, iyo Venus weBadalona, 28-centimeter statuette inotangira panguva yekuvambwa kweguta.
Imba yeDolphins uye Bindu reQuinto Licinius
Nemusuwo wemu museum iwe zvakare unowana mvumo yekushanyira nzvimbo mbiri idzi. Iyo Dolphin Imba iri zvakare pasi pevhu uye yakatumidzwa zita rezvakakosha dolphin mosaic Vanoshongedza dziva ravo kuti vatore mvura. Yaive hombe domus Shongwe yeRoma yemamita angangoita mazana masere, kunyangwe nhasi uchingoona anenge mazana matatu.
Kune chikamu chayo, the Bindu reQuinto Licinius zvinogona kukuodza moyo zvishoma. Zvamunoona nhasi rudzi rweidziva iro, munguva yaro, rinofanira kunge rakange rakazara nemiti nemaruva. Nekudaro, iwe unogona kuwana zano rekuti zvanga zvakaita sei kutandara chaiko inopihwa nenzvimbo. Munzvimbo ino, iyo Tabula Hospitalis, mhando yechibvumirano chakasimbisa Chechishanu Licinius semudziviriri weBaetulo uye kuti iwe unogona zvakare kuona mumuseum.
Yakakosha kwazvo yaive yakapfuura yeRoma yeBadalona zvekuti, gore rega rega, guta rinosimudzira iro Magna Celebratio, panguva iyo mauto echiLatin anofamba nemumigwagwa yayo nenzvimbo dzevashandi venguva dzinoiswa mumakona ayo.
Mukupedzisa, inokupa iwe yakawanda Badalona. Kune yakakosha nhaka yeRoma unofanirwa kuwedzera zviyeuchidzo zvakakosha, mapaki mahombe nemabhichi akanaka. Kana iwe ukashanyira guta rino, hauzombozvidemba. Zvakare, kana iwe uchida kutora mukana werwendo rwako kuti uite zvimwe zviitiko, bvunza vedu rondedzero yemapaki emvura akanakisa muCatalonia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Badalona